Rakaab iyo Gaadiid Badan oo Weli ku Xaniban Togga Ceeldaahir (sawirro & waraysi) – Radio Daljir
Rakaab iyo Gaadiid Badan oo Weli ku Xaniban Togga Ceeldaahir (sawirro & waraysi)
May 17, 2017 3:33 g 4
Qaar kamid ah shacab safar ah oo weli ku xayirmay Togga Durdur ee u dhaxeeya Ceeldaahir iyo Carmo oo la soo xiriray Radio daljir ayaa sheegay in doorkeeda Puntland aysan ka qaadin kala hagida gawaarida ku xaniban halkaas.
Qaar kamid ah rakaabkii saaka ilaa maanta ku xayirna togaa kana baxay Garoowe ayaa sheegay in inaan gurmad iyo cafimaad iyo ciidanba aysan joogin goobta oo ay jiraan caruur biyaha ay ka rebeen dadka rayidka ah.
Waa la Doogsaday!
siciid mohamed 1 year
waaa in ay dowlada puntland ay u sameyso buundo ay soo maraan gawaaridu laguma xanibnay hadii ay dowlada hory u sameyn lahayd qandaraaskan
Mohammed koronto Habsey 1 year
Asc wrx… Horta daaadadka waa nimco iyo naxariis alle keeney Alx.
Marka ayaaana laga cabaadin ama nixin.
darawalka gaadiidka wata, shacabka puntland iyo dowladana waxaa loobaahan yahay Qaab wada tashi ah buundo awood leh halkaas looga sameeyo.. insha allaah..
in dowlada Waxkasta laga sugaa Xal iyo xeel midna ma ahan. dowladu waa shacabka, shacabkuna dalkiisa ha dhisto.
Gadou 1 year
Dadow Marna ma oon banad ka cabaneysaan marna daad oo goormaad EEBE ku mahadineysaan,oo
rayrayn & gooshoor ku ledeysaan?
Assalaamu Alaykum , Radio Daljir , Dadka Rakaabka ah ee halkaas ku xaniban waxaan leeyahay Eebe wayne u mahadiya Dhibtii la ogaa nooga gargaaray xanibaadaana waligeed jiri mayso , teeda kale Ceel daahir iyo Ceeri gaabo wadada u dhaxaysa ayada baa dhismo ku jirtay marka shacabkaas rakaabka ah dulqaata baan leeyahay
Radio Daljir Mahadsanidiin